Indlela ugeze imoto yakho noma Moidodyr isilwane sakho.
Utho unjengomuntu reciprocates ku ngothando nangenhlonipho. Yebo, futhi kumnandi ukuhlala emotweni I bahlanzwa, ngaphakathi okuyinto wahamba vacuumed kahle. Lo muzwa ezimnandi lifana ukuthi bazizwa, nokuhlala emotweni entsha: ukuziqhenya oluphethe yinto enhle futhi ekhazimulayo. Ukuze sizibonele lo muzwa ungawoni ozithandayo wakhe, udinga ukwazi ukuthi ukugeza kahle imoto yakho.
Njengoba isisho sibonisa, uma ufuna izinto kwenziwe kahle, wenze konke yena. Kunezindlela ezicashile ambalwa ukuwasha kahle imoto yakho. Ngakho,
► Okokuqala, udinga cwilisa inhlabathi, bese isusa ke. Kunoma ikuphi akunakwenzeka zizifunele ibhulashi imoto noma isiponji kanzima.
►Mashinu aqale ukugeza ophahleni, kancane kancane uya phansi amanzi angcolile akabashiyi amabala phezu kakade zagcwala.
►Verhny udaka ungqimba ehlanganisa ngokuyisisekelo ngothuli, kulula ukugeza off ngamanzi. Kodwa izingqimba okwalandela ehlanganisa asphalt exutshwe ukungcola, uwoyela, iminonjana izinyoni ngeshwa isinambuzane futhi cishe baze kudingeka ngokukhethekile imoto imoto ukugeza. Kuyinto engabizi, kodwa umsebenzi walo ukuze ubhekane yokugeza izitsha kangcono ketshezi.
► Uma kakade wathenga imoto imoto, bese uya alinamali ngisho isiponji ezithambile ukuwasha izimoto. Sponge lungaphezu akukhetha kunoma amanikiniki.
►Nelzya ugeze imoto yakho ku ukushisa noma ukubanda okwedlulele. Lokhu kuzokwenza umonakalo omkhulu kumshini wakho. sezulu Perfect egeza - ezomile, esinamafu futhi windless ....
amasondo ►A kungcono ukuhlanza ibhulashi kanye Fairy, ukuze abe ukugeza insila ezinhle. Uma sidebeselela ukuwasha kanye iraba amadiski, lokhu udaka cishe ke kungenzeki ukususa nganoma iyiphi indlela.
► Ekuphetheni, imoto waphinda engahashazanga wesula ezomile. Glass kuyinto efiselekayo ukwenza indwangu negogo.
Uma nganoma isiphi isizathu, awukwazi babonakala ugeze imoto yakho, ungenza kanjalo ngaleso ukugeza imoto. Kube uzonikezwa ukukhetha yokuxhumana noma non-contact car wash. Ukuze contact yokuhlanza, washcloths ekhethekile, uzakuhamba emshinini wakho, okubangela it umonakalo eningi. Njengoba siphila eRussia, kodwa hhayi e-Europe, qiniseka ukugcina imoto, futhi amasondo uyohlanza kahle. Nakuba yimuphi umthetho zikhona ezehlukile ...
Lapho le yokuxhumana yokuhlanza, car wash ngeke nengcindezi enamandla amanzi usebenzisa okuthiwa Foam asebenzayo. Okungukuthi, umthelela esimweni semoto umnene, futhi imoto akukho umonakalo mechanical uzobe inflicted. Ngaphezu kwalokho, omunye izinyathelo egeza kungenzeka isicelo umshini wax asebenzayo, elizovimba umshini ehlanzekile futhi omlandelayo ngokweqile siyonikeza ukubukeka akhishwa imisebe yalo.
Kodwa akwanele ukwazi ukuthi ukugeza kahle imoto yakho, futhi udinga ukwazi lapho ungakwazi ugeze imoto yakho. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukugeza imoto yakho, can ngasiphi endaweni oyithandayo. Ziyakwazi kakhulu iphutha okuningi. Endaweni ezisemadolobheni noma kunjalo ayikwazi ugeze imoto yakho ku lokudlala, otshanini, ngamanye amazwi, egcekeni efulethini isakhiwo sokuhlala. Khumbula ukuthi uma kukhona uqaphile nesibabule ugogo nazhaluetsya esifundeni, kuzodingeka ukuba ngikhokhe inhlawulo. Futhi kuyoba, ilungelo lalo. Uma wonke umuntu ufuna ukugeza izimoto egcekeni, kufanele ahlanze Yonke iminyango. Yebo, futhi nje hhayi okuhle zizalela ukungcola kanye nenhlonipho kwabanye abantu.
Kufanele futhi kugwenywe ukusebenzisa njengoba yokuhlanza emifuleni kanye amachibi. Babuye sinqatshiwe ukugeza imoto. Kukhona okuthiwa amaphoyisa kwemvelo, okuyinto yengamela salokhu. Ngakho, lapho Kusengenzeka ukugeza imoto? Ungakwazi geza ngokuphepha imoto yakho kusayithi phambi kwendlu yakhe, egalaji, uma kukhona izimo zalokhu, futhi ngesikhathi ukugeza imoto. Umthetho libuye lithi 'kunesikhathi endaweni eyayibekelwe ngokukhethekile wokugezela "kodwa nzima ukuthola kuka umcebo.
Manje njengoba siyazi kanjani futhi kuphi ukugeza imoto yakho, ungakwazi ngokuphepha uqhubekele ukugeza ozithandayo yakhe.
Calm Korean "Hyundai-Tradzhet"
Ingilazi Armored: design, izinhlobo, izici
Esikhundleni izikopelo isondo phambi. Yomiselela kanye nokulungiswa izikhonkwane phambi isondo
Muva Koenigsegg Agera waqala ukudayisa, kodwa funa ayamangalisa!
15 Amaqiniso mayelana nezimoto Tesla, okuyinto cishe Angazi
Eliphezulu upende bumper ukulungisa izandla zabo
Self-massage ebusweni, noma kanjani ukugcina intsha
Culottes. Iphethini nobuchwepheshe ekuhlanganiseni
Imithi 'Triampur'. Yokusetshenziswa
Ezokuthutha: ivolumu kanye nomthamo izinqola
Ubuchwepheshe obunjalo obungavamile
Navigation for the "Android". Navigation ngaphandle internet for "Android". izinhlelo lokuhamba for the "Android"
Izidakamizwa "Reopoligljukin": yokusetshenziswa
Amazinyo mhlophe ocushiwe carbon. Namathisela i-mhlophe amazinyo. Amazinyo mhlophe - intengo e Moscow
Ancient Egypt. Cleopatra - umbusi wakhe wokugcina
Dovator Jikelele: Biography. Army General Dovatora
Imininingwane emphakathini. Iqhaza kolwazi emphakathini
Ukuze uthole ngu: umthandazo umshado nokuphila siqu